Akụkọ anyị - Shanghai Copak Industry Co., Ltd.
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, nke e guzobere na 2015, na ụlọ ọrụ ahịa na Shanghai na ụlọ ọrụ metụtara na Zhejiang. COPAK bụ ọkachamara soplaya nke Eco-enyi na enyi nri & onunu nkwakọ ngwaahịa: PET iko, PET karama, Akwụkwọ ọkwá, wdg
COPAK na-agba mbọ idobe ngwaahịa ọhụụ nke na-aga n'ihu ma na-enye ndị ahịa ọnụ ahịa na ngwaahịa dị elu. Copak ọkọnọ PET cup na PET kalama niile mpịakọta, site 1oz ruo 32oz, ma doro anya na omenala e biri ebi. Dị ka a ogologo onye na-emeri na soplaya maka ndị ahịa anyị, anyị na-kwara iji chepụta na Nlụpụta pụrụ ịdabere na, ruru eru na nkecha PET iko na karama.
Uzo a na-enweghi uzuzu nke COPAK nwere otutu ihe di iche iche di iche iche maka nri na ihe onunu (ulo nri, agbụ nri ngwa ngwa, ulo ahia kọfị, ogige nri, nnukwu ụlọ ahịa na wdg) yana ndị na-azụ ahịa ahịa. A na-eji iko ndị a na karama eme ihe maka ihe ọ drinksụ Coldụ mmanya, ihe ọverageụ ,ụ, kọfị akpụrụ mmiri, ndị ire ụtọ, afụ / buba tea, milkshakes, mmanya a kpụkọrọ akpụkọ, mmiri, sodas, ihe ọicesụ juụ. Ihendori na ice-creams.
Anyị nyere PET iko na karama maka ọtụtụ ama ika. Ugbu a, anyị na ngwaahịa nwere ike hụrụ n'ụwa nile. Site na COPAK, ndị ahịa ga-enwerịrị nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, ma na-enye otu n'ime oge mgbanwe ọsọ ọsọ nke ụlọ ọrụ maka ngwaahịa ndị nwere ike iwepụ.
Workshopjá Free omumuihe
Advanced mmepụta akara
Gradekpụrụ ọkwa ọkwa nri
Copak na-achọ mgbe nile iwulite azụmahịa ogologo oge na ndị ahịa. Ogo bụ mgbọrọgwụ, ndị ahịa bụ echiche. Copak mgbe niile na-àgwà na ọrụ dị ka ndụ, na-enye àgwà ngwaahịa na circumspect ọrụ ji obi dum.We nwere onwe anyị ọkachamara QC otu na gafere FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 asambodo.
Egburugburu ebe obibi ọrụ soplaya:
Copak na-echekarị gburugburu ebe obibi ma na-agbasochi usoro ebumnuche nke nchekwa gburugburu ebe obibi anya. N'oge a, ngwaahịa ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-adọrọ uche ndị mmadụ. Copak jiri ihe ndi ozo banyere gburugburu ebe obibi, dika RPET na PLA na Paper. Anyi choro ime ka mmepe di n'etiti mmadu na okike.
Sndị na-elekọta ọrụ na-elekọta mmadụ:
Copak nwekwara ọrụ iji belata nrụgide ọrụ, na-akpali ikike nke ndị ọrụ, na-eduga na Nwepụta onwe onye, ​​na inye onyinye na ọha mmadụ. Nzube anyị na-aghọta na adabako ịdị n'otu nke enterprise, mkpara, na otu.